Kobaca iyo xuduudaha kale ee Robert Downey Jr.
Stars Ansixinta qorraxda
Ragga ayaa u muuqda in ay cabbiraan sicirka mitir, iyo sicirka korriinka, oo ay ku jiraan. Tani waa feejignaan jireed oo muhiimad weyn u leh, gaar ahaan haddii uu yahay nin aqoon u leh dunida oo dhan. Oo aan garanaynin Robert Downey Jr., ayaa si fiican u ciyaaray doorka Tony Stark ee filimka ficilada cajiibka ah "Iron Man"? Waxay u egtahay inaad weli ku riyoon karto, sababtoo ah waxaa jira ammaan, iyo barwaaqo, iyo nolol farxad leh. Hase yeeshee, dhab ahaantii, jilaha ayaa hal dhigay, sababtoo ah Robert Downey Jr. ma jecli in lagu sawiro koboc dhammaystiran. Dabcan, ka fogaanshaha kaamirooyinka - hawsha loo baahan yahay jilayaasha la dalbaday waa mid aan suurtogal ahayn, sidaas darteed inta badan dadweynaha, wuxuu u muuqdaa kabo leh ciriiri sare . Waa maxay dhererka Robert Downey Jr.?
Waxay ka soo baxday shaashadaha TV-yada iyo roogaga guduudan si aan u eegno dadka kalsooni la'aan, iyada oo aan lahayn dhibaatooyinka, isku-dhafka iyo dhibaatooyinka, lakiin dhab ahaantii waa jilayaashu waa dad caadi ah. Sidaa darteed, Robert Downey, oo jecel malaayiin taageera iyo taageerayaal, wuxuu aaminsan yahay in kobaca uu aad u yaryahay. Dabcan, wuu ka dhigayaa hadaladan, laakiin gabagabadii waa iska cadahay. Goobta rasmiga ah ee rasmiga ah, oo la heli karo qof kasta oo wadaaddada Melpomene ah, waxaa la cadeeyay in Robert Downey Jr. uu leeyahay height u dhigma 174 sentimitir, iyo culeyska gudaha 73-75 kiilogaraam. Laakiin xogahan waxaa la weydiiyay marar badan, waana sababtaas.
Sanadkii 2003, dib u soo kabashada Deborah Falconer, Robert wuxuu guursaday Susan Levin. Kalkaaliyaha labaad ee actarka, oo ah soo saaraha, marnaba ma qarin dhererkeedu - 160 sentimitir. Maxay qarsoodi kartaa, haddii la eego heerarka caadiga ah ee la aqbalo, waxay ku haboon tahay "macnaha dahabka"? Xalalka xisaabta hoose ee hoose ayaa ku filan si loo ogaado farqiga koritaanka ee u dhexeeya Robert Downey iyo xaaskiisa, oo ah 14 sentimitir. Laakiin sawirada ay qaadeen Paparazzi fasaxii jilitaanka ee xaaskiisa oo ku yaal xeebta, ayaa tilmaamaya in farqigaasi uu yar yahay. Tani waxaa si fudud loo arki karaa iyagoo eegaya sawirka hoose. Xitaa indhaha qaawan waxaa cad in koritaanka Robert Downey Jr. Ma gaadho 174 sentimitir. Waxay ku kala duwan yihiin xuduudaha 170-172 sentimitir.
Tani miyuu sabab u yahay kakoobidda dhirta ? Qof kasta oo ku filan ma arki doono dhibaatadan. Laakiin actorka ayaa u maleynaya si kala duwan, sababtoo ah dhacdooyinka festifaalka waxa la ogaaday in kabadan hal kabo oo kordhiya kobaca. Xaqiiqdii, in gardarrada Hollywood-ka, kabaha iyo kabaha leh cirifka sare ee duullimaadka, oo uu isku dayayo in uu ku dhuubo lugaha dhererka dheer. Laakiin kama baxsana kaamirooyinka paparazzi oo dhan.
Waxa kaliya oo ay tahay in la qiyaaso sababta uu jilaygu u dabaalanayo raajada sharafta, nasasho u leh xirfado la mid ah. Meelaha ay muhiimka u tahay in la hoggaamiyo qaab nololeed caafimaad leh, wax qarsoodi ah maahan in Robert Downey Jr., oo markii ugu horreysay lagu arkay muuqaal shan jir ah, uu lahaa dhibaatooyin khamri iyo daroogo. Xaaladda suntan, wuxuu inta badan abaabulay dagaallo, hal maalinna wuxuu ku seexday deriska qaawan ee qolka fadhiga, oo fuulay bowd habeenkii. Sannadkii 1996-kii, jilaa ayaa lagu qasbay in lagu daweeyo khasaaraha mukhaadaraadka, ka dibna wuxuu ku qaatay sannad iyo badh xarig.
"Iron Iron" ayaa soo bandhigay muuqaal ku saabsan sirta farsamada
Sidee ayuu Robert Downey Jr. ku kasbaday $ 10 milyan rubuc saacad ah?
33 sawirro caan ah oo ka soo jeeda 90, taas oo ka wanaagsan in la illoobo
Sida laga soo xigtay Robert, waxaa laga soo badbaadiyay khamriga iyo daroogada Susan Levin, oo uu ugu yeeray haweenayda quduuska ah.
Horumarka yar ee Prince wuxuu diiday faragelinkiisa
Kobaca Kylie Minogue
Jamie Lee Curtis dhalinyaro
Kordhinta Reese ee Wareega
Dhererka iyo culeyska Gwyneth Paltrow
Kordhinta David Bowie
Dhererka, miisaanka iyo xuduudaha kale ee Emma Roberts
Drew Barrymore da'diisa
Kordhinta David Duchovny
Ariel Winter ka hor iyo ka dib qaliinka
Kim Cattrall oo da'diisa ah iyo hadda
Irina Sheik: habka Cinderella ee ka soo baxaya Ruushka oo loo yaqaan 'Podium'
Ornella Muti - da'diisa iyo hadda
Warshadaha nukliyeerka ah
TOP-10 aphrodisiacs dabiiciga ah
Ordinary Portalac - sida loola dagaalamo?
Cutlets kaabash - qajaar
Nalalka faraha badan ee jikada
Sawirada yaryar ee gabdhaha
Tiibishada xubnaha taranka
Waraaqaha diiwaangelinta dhalaanka cusub
Musaka leh eggplants iyo baradhada - qashinka
Xulashada ilaa taariikhda dhalashada
Xanaaq ka soo duub
Dharka ku qabo dhulka si gabdhaha oo dhan
Sida loo daboolo hawada qolalka - sida ugu fudud ee ugu haboon
Qalabka loogu talagalay daahyada
TALLAAD 12 xaqiiqda ku saabsan iskuulada Japan ee aad ogtahay
Sidee loo sameeyaa baraf baraf ah?
29 "Ragga da'da ah" ee laba xisaabood ayaa kaa qaadi doona waali